Somaliland: midnimo diyaar uma nihin - BBC Somali - Warar
Somaliland: midnimo diyaar uma nihin
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 13 Abriil, 2013, 11:26 GMT 14:26 SGA
Shirka Soomaaliya iyo Somaliland ay ku leeyihiin Ankara.
Wasiirka arrimaha dibada ee Somaliland Maxamed Cabdulaahi Cumar ayaa BBC u sheegay in Somaliland aysan diyaar u hayn inay ka hadasho midnimo, shir ay Soomaaliya iyo Somaliland ku leeyihiin Ankara ee dalka Turkiga. Waxaa shirka hogaaminaya Raiisalwasaaraha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
Somaliland iyo Somaaliya ayaa kawada hadlaaya sidii labada dhinac ay u gaari lahaayeen xal siyaasadeed. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sh Maxamud iyo madaxweynaha Somaliland Axmed Silanyo ayaa hogaaminaya wafdiga labada dhinac.
Dowladda Turkiga ayaa ku martiqaaday labada wafi kulankan. Dowlada Soomaaliya waxa ay sheegtay in la gaaray waqtigii laga hadlayay midnimada Soomaaliya. Waxaa kaloo laga halayaa burcad baddeeda, iyo ammaanka.